डा कार्कीसँग भिडियो वार्ता: कोरोना बढ्दै जाँदा क्यान्सरका बिरामीले कसरी पाउँदैछन् उपचार? :: रिता लम्साल :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
डा कार्कीसँग भिडियो वार्ता: कोरोना बढ्दै जाँदा क्यान्सरका बिरामीले कसरी पाउँदैछन् उपचार?
रिता लम्साल शुक्रबार, पुस ३०, २०७८, ०७:१६:००
काठमाडौं– कोरोना महामारीका कारण क्यान्सर रोगको क्षेत्रमा पनि प्रभाव पारेको बिपी मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका क्यान्सर सर्जन डा अनिल विक्रम कार्कीले बताए।
नेपालमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि लकडाउन हुँदा र अन्य स्वास्थ्य सेवा बन्द हुँदा क्यान्सरका बिरामीहरुले समयमा क्यान्सर पहिचान गर्न नसकेको तथा उपचार पाउनबाट बञ्चिन हुनुपरेको डा कार्कीले जानकारी दिए।
जसले गर्दा कोरोना महामारी कम भएसँगै क्यान्सर ‘ओभरस्टेजिङ’, निको भएको क्यान्सर फेरि बल्झिएको अवस्थामा आइपुगेको डा कार्कीले बताए।
पहिलो चरणको कारोना महामारीमा लकडाउनका कारण बिरामीहरु अस्पतालमा आउन नसक्दा क्यान्सर रोगका बिरामीहरुमा समस्या बढेको उनले जानकारी दिए।
कोरोना महामारीको दोस्रो लहरमा भने जनस्वास्थ्यको मापदण्ड तथा पिसिआर परीक्षण गर्ने व्यवस्था सहित अस्पतालले क्यान्सरका बिरामीलाई सेवा प्रदान गरेको उनले बताए।
दोस्रो लहरको संक्रमणमा भने कोभिड र ननकोभिड क्यान्सरका बिरामीलाई छुट्टाछुट्टै सेवा दिएको डा कार्कीको भनाइ छ।
नेपालमा ओमिक्रोन भेरियन्टको संक्रमण देखिएसँगै अहिले कोरोना संक्रमणदर बढ्दै गएको छ। संक्रमणदर बढ्दै गएपछि क्यान्सर अस्पतालले क्यान्सरका बिरामीहरुका लागि सेवा जारी राखेको उनले बताए।
बिपी मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालले सम्भावित तेस्रो लहरमा पनि क्यान्सरको उपचार सेवालाई निरन्तरता दिन सोही अनुसार पूर्व तयारी गरिएको बताए।
कोरोना महामारीको अवस्थामा क्यान्सरका बिरामीको उपचार कसरी भइरहेको छ? नेपालमा कस्ता क्यान्सरका बिरामीहरु बढी छन्? ती बिरामीको उपचार सेवाको पहँुचमा कतिको छन्? सरकारले दिने सहुलियत क्यान्सरका बिरामीका लागि कति पर्याप्त छ? क्यान्सर हुनबाट बच्न र क्यान्सर निको भइसकेपछि रोग फेरी बल्झिन नदिन के गर्नुपर्छ लगायतका बिषयमा डा कार्कीसँग कुराकानी गरेका छौं।
प्रस्तुत छ डा कार्कीसँग गरिएको भिडियो कुराकानी: